Caalamka, 15 May 2017
Isniin 15 May 2017
Yemen: Cudurka Daacuunka oo ka Dilaacay Sanca
Xaalad bani'aadnimo oo deg deg ah ayaa lagaga dhawaaqay caasimadda dalka Yemen ee Sanca, ka dib markii halkaasi uu ka dilaacay xanuunka daacuun caloolaha ay u dhinteen tobanaan qof.
Laanta Booliska Yurub ayaa sheegtay in weerarka Internetku uu saameeyey ugu yaraan 100,000 oo hay’adood oo ku kala yaalla 150 waddan, waxaana dhacaysa in marka kooxdani Computerka jabsato inay qafilanayaan macluumaadka iyo xogta kuugu jirta illaa laga siinayo madaxfurasho.
Golaha Ammaanka oo Kulan ka Yeelanaya K. Woqooyi
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobay ayaa la filayaa inuu maalinta Salaasada uu qabto kulan degdeg ah oo looga hadlayo tallaabada ugu dambaysay ee Kuuriyada Woqooyi ay ku tijaabisay gantaalka.
France: Macron oo la Caleemo-saaray
Madaxweynaha cusub ayaa jeediyey khudbad uu kaga hadlay inuu wax kaga qabanayo dhaqaalaha waddankaasi, waxaa kale oo uu sheegay in dib loo dardan gelin doono Midowga Yurub.
Dowlada Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Axad ah tijaabisay gantaal kuwa riddada dheer ah oo gaari kayara ilaa 4,500 kiilo-mitir.
Faah-faahinta Weerar Dhinaca Internet-ka ah oo Lagu Qaaday Dalal Dhowr Ah
Jimcihii shalay waxaa ilaa sagaashan dal oo dunida ku yaala saameeyay weeraro balaaran oo dhinaca internetka ah oo sida la sheegay loo maray barnaamij ama software horey looga xaday heyadda amaanka Qaranka Mareykanka ee NSA.